Soo -saarayaasha Biibiyaha UPVC | Shiinaha UPVC Bixiyeyaasha Biibiyaha & Warshadda
Waraaqda adag ee PVC (UV Xasilloon)
Rinjiga PVC waa maaddada ugu weyn ee Tuubada Kiimikada ee PVC-U, tuubada waa la dhammeeyaa iyada oo lagu darayo qaddar habboon oo wax lagu daro, isku-darka geeddi-socodka, fidinta, cabbirka, qaboojinta, goynta, qaylada iyo tiknoolajiyado badan oo kale. Dheecaano kiimiko oo kala duwan ayaa lagu wareejin karaa tuubo noocan oo kale ah oo ka hooseysa 45 ℃, waxaana loo isticmaali karaa gudbinta biyaha aan cabin isla cadaadiskaas.
Faahfaahinta: Ф20mm - Ф710mm
PVC biibiile hufan
Midabka: Cad, hufan.
Agab: Qalab qalafsan oo soo saarid
Faahfaahinta badeecadda: Φ25mm ~ Φ110mm
Cabbirka: Waxaan sameyneynaa astaamo iyadoo la raacayo shuruudaha macaamilka ee sawirka.
Saameynta sare ee tuubooyinka sahayda biyaha ee PVC-M waxaa laga sameeyaa walxo aan dabiici ahayn oo adkaysan kara tuubada, habkani wuxuu ilaalin karaa sifooyinka xoogga sare leh ee walxaha PVC, isla mar ahaantaana wuxuu leeyahay adayg wanaagsan iyo awoodaha iska caabbinta cadaadiska sare, wuxuuna kor u qaadaa dheellitirka maaddada iyo hantida ka hortagga dildilaaca sidoo kale.
Faahfaahinta: Ф20mm - Ф800mm
Sunflower brand non-plasticizing waxqabadka adag olol retardant dahaaray PVC-U tuubooyinka korontada iyo accessories, si waafaqsan heerarka shirkadeena iyo JG/T3050-1998 design iyo wax soo saarka caadiga ah, tuubooyinka korontada PVC leeyihiin sifooyin aad u fiican sida iska caabin cadaadis xoog leh, iska caabin daxalka, caabbinta cayayaanka, dib-u-ololiyaha iwm.
Faahfaahinta: Ф16mm -Ф50mm
Dhuumaha Waraabka ee PVC-U waxay u isticmaalaan cusbi PVC waxyaabaha ugu muhiimsan, waxaa la dhammeeyaa wax-ka-beddelidda iyadoo lagu darayo qaddar habboon oo wax lagu daro, isku-darka geeddi-socodka iyo tikniyoolajiyadda wax-soo-saarka.
Dhab ahaantii waa alaab biibiile caag ah, qaybta ugu weyn waa cusbi PVC. Marka la barbardhigo tuubooyinka kale ee dheecaanka, waxqabadka PVC waa la diyaariyey, faa'iidooyin kale ayaa lagu daray.
Faahfaahinta: Ф75mm -Ф315mm
PVC-U Pipe wuxuu u adeegsadaa xabagta PVC sida maaddada ugu weyn, waa la dhammaystiray wax-ka-beddelka iyada oo lagu darayo qaddar ku habboon oo lagu daro, isku-darka, fidinta, cabbirka, qaboojinta, goynta iyo qaylada iyo farsamooyin kale oo badan oo wax-qabad, waqtigeeda shaqadu wuxuu gaari karaa 50 sano.